Ama-FAQs - Amathuba weFranchise Athengiswayo |
»Imibuzo Evame Ukubuzwa sika
Amathuba Athengiswayo WaseFranchise
Ngibhekabheka ngamakhulu ama-franchise athengiswayo enkombeni yethu ye-franchise UK kanye nemikhombandlela yamathuba wefranchise yomhlaba
Yini amathuba we-franchise?
Amathuba weFranchise ayindlela yokusabalalisa imikhiqizo noma izinsizakalo ngenqubo yezinelayisense zebhizinisi, imikhiqizo, izinsizakalo & nempahla enengqondo kubatshalizimali abazosebenza ngaphakathi kwemodeli yebhizinisi esetshenzisiwe. Okungenani amazinga amabili abantu abandakanyeka ohlelweni lwe-franchise: (1) i-franchisor, enikeza uphawu lwayo lwentengiso noma igama lokuhweba & uhlelo lwebhizinisi & (2) umnini-mpahla, okhokha ubukhosi obuqhubekayo futhi imvamisa imali yokuqala yenza ibhizinisi ngaphansi kwegama nohlelo lwefrigisor.
Ukufomatha ifomethi yebhizinisi luhlobo olukhonjwa kakhulu kumuntu ophakathi. Ebuhlotsheni bebhizinisi lefomethi yebhizinisi, i-franchisor ihlinzeka i-franchisee hhayi nje igama layo lokuhweba, imikhiqizo nezinsizakalo kodwa lonke uhlelo lokusebenza kwebhizinisi. I-franchisee ngokuvamile ithola ukukhethwa kwesiza nokuxhaswa kokuthuthukiswa, izincwadi zokusebenza ezisebenzayo, ukuqeqeshwa, amazinga emikhiqizo, ukulawulwa kwekhwalithi, isu lokumaketha kanye nokuxhaswa kwezeluleko zebhizinisi kusuka kufrigisor. Ngenkathi kukhonjwe kancane nge-franchising, ukuhlelwa kwendabuko noma komkhiqizo kungokwengeziwe ekuthengisweni okuphelele kunokwefomethi yefomethi yebhizinisi. Ku-franchise yendabuko, ukugxila akusikho ohlelweni lokwenza ibhizinisi kepha ikakhulukazi emikhiqizweni eyenziwe noma enikezwe yi-franchisor kufranchisee. In most, kodwa hhayi zonke, izimo, imikhiqizo ekhiqizwayo ngokuvamile idinga isevisi yangaphambi neyokuthumela njengoba itholakala embonini yezimoto.
Amathuba Franchise amboza izimboni eziningi, hhayi nje ukudla njengoba abaningi bakholelwa. Ezinye izibonelo yizingadi zokunakekela izingadi & utshani, izikhungo zokufundisa izingane, ukunakekelwa kwezimoto, kubandakanya nemoto yokunakekela, ukulungisa kanye nokuthengisa kwezimoto nezinye izinhlobo eziningi ezimhlophe, ezezitolo kanye nezama-fan based. Eqinisweni noma yiliphi ibhizinisi elihunyushelwa kumakhono negama lokuhwebelana lingahunyushwa libe yi-Franchise UK Directory yethu kungenye yezikhombisi zamathuba ezingosi ezingama-60 zomhlaba ongazihlola ukuthola ibhizinisi lakho elifanelekile le-Franchise.
Kungani uthenge ithuba le-franchise?
I-franchise empeleni iphinda ibhizinisi elivele liphumelele ngakho-ke uma ulikopishela kahle futhi izimo zemakethe endaweni yakho ziyafana ke unethuba elikhulu lokuphumelela ebhizinisini lakho elisha. Ochwepheshe abaningi abaholayo nezinhlangano ze-franchise bathi amazinga wokuqalisa wokuphumelela we-franchise angaphezulu kwama-95%, mkhulu kakhulu kunalokho lapho usetha ibhizinisi ngokwakho. Okunye futhi okuhehe kakhulu kwabaningi abathenga i-franchise ukukwazi ukushintsha ukuqondiswa kwekhono lomsebenzi. Lapho uthenga i-franchise uthenga imodeli efakazelwe futhi uqeqeshwa futhi usekelwa ngochwepheshe abafakazelwe emkhakheni wabo ngakho-ke kungaba yindlela enhle yokwenza umsebenzi omusha noma ukuguqula umsebenzi wakho okhona ube ibhizinisi lakho siqu. Abacebisi be-Franchise bangasiza i-franchise yebhizinisi ngokunikeza izeluleko kanye nesiqondisi kuyo yonke inqubo yenqubomgomo yokuqinisa.
Thola okuningi mayelana nama-franchise athengiswayo
Kule webhusayithi sinemibhalo eminingi ye-franchising, izindaba kanye nezinsizakusebenza zamahhala zezinsiza kanye nemininingwane emayelana nohlu lwe-franchise Association uk Sine izinkomba zezwe ezingama-60 zezindawo ezithengiswayo ukuze ubuke ama-Franchise athengiswa endaweni yakini mane uchofoze kwisikhombi sencwadi yakho. izwe futhi udlulise amehlo ezindabeni zokuvunyelwa kwenkundla kanye nezinhlaka ezithengiswayo. Ngikufisela inhlanhla ngokusesha kwakho okuhle.
Sesha amathuba e-UK ase-Franchise namathuba we-franchise aphesheya, izindaba ze-franchise, izeluleko zebhizinisi kanye nezibalo ze-franchise ku-Franchiseek Franchise directory
Amathuba Franchise ngezwe nangesigaba
Bamba ezindabeni ze-franchise yasendaweni kanye nokuvulelwa okusha
Funda ngezindaba zebhizinisi nokuxhaswa okusekelwa ochwepheshe bendawo
Thintana nabalingani bethu noma izinhlangano ze-franchise ukwesekwa ku-franchising yendawo
Qala uhambo lwakho lwe-franchising namuhla!
Awekho ama-Franchise atholakele!